Xiaomi ရဲ့ ဈေးအသက်သာဆုံး 108MP Camera ဖုန်းကိုတွေ့ရဦးမယ် — Anycall Mobile
Xiaomi ရဲ့ ဈေးအသက်သာဆုံး 108MP Camera ဖုန်းကိုတွေ့ရဦးမယ်
By liam September 20, 20202Mins Read
၂၀၁၉ အချိန်လောက်တုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဖုန်းအသစ်တွေမှာ Camera Megapixels များများထည့်ပေးလာတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ‌ဒီလို Camera MP များများနဲ့ ပထမဆုံးဖုန်းကတော့ 64‌MP Image Sensor သုံးထားတဲ့ Redmi Note 8 Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းဟာပထမဦးဆုံး 64‌MP ပါလာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရင်လည်းမမှား.. ဒီလိုနဲ့ လအနည်းငယ်အကြာမှ‌ာ လူတိုင်းအံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ 108MP ဖုန်းထပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ အခုထိတိုင် လူမေးများနေတဲ့ CC9 Pro ( Mi Note 10) ပါပဲ။
ဒီလို Xiaom ဘက်ကနေ MP များတဲ့ ဖုန်းတွေကို ထုတ်သုံးပြခဲ့လို အခုလက်ရှိ Flagship ဖုန်းတွေကြားမှာ 108MP Camera ဟာ နာမည်ကြီးလို့လာခဲ့ပါတယ်။ 64MP Camera ဟာ လည်း Mid-range ဖုန်းတွေမှာ နာမည်ရလို့လာခဲ့ပါတယ်။
အရင်လလောက်တုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ ဒီလို Camera Sensor တွေနဲ့ထွက်လာဦးမယ့်ဖုန်းနှစ်လံုးကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ထုတ်လာမယ့်အကြောင်း သတင်းတွေထွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီဖုန်းတွေရဲ့ Model နံပါတ် နဲ့ 108MP Camera ပါလာမယ့်အကြောင်း Leakster တစ်ဦးက Weibo မှာတင်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။
ဒီ Leak အသစ်အရ အခုဖုန်းအသစ်တွေဟာ Gauguin ၊ Gauguin Pro ဆိုပြီး Codename ပေးထားပါတယ်။ Gauguin Pro မှာ 108MP sensor ပါလာဖို့ရှိနေပြီး ရိုးရိုး Gauguin မှာတော့64MP ပါလာဖို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ နောက်ထပ် နာမည်ကြီး Tech Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GSMARENA အရ Gauguin Pro ဟာ ဈေးအသက်သာဆုံး 108MP camera ဖုန်းဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဈေးသက်သာလာမယ်လို့ သတင်းထွက်ထားတာနဲ့အညီ ဖုန်းဟာ Redmi Brand အောက်ကနေထွက်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပေါ်က အချက်တွေကိုသိထားရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဖုန်းတွေထွက်လာဖို့ အချိန်သိပ်မလိုတော့ဘူးလို့ Leakster ကဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
Xiaimo အနေနဲ့ မကြာခင်မှာ Redmi Note 10 series ထုတ်ဖို့ရှိနေပြီး နို၀င်ဘာလလောက်မှာလည်း Mi CC series အသစ် ကိုထုတ်လာဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်က ဖုန်းနှစ်လုံးဟာ Redmi Note 10 Series ဒါမှမဟုတ် Mi CC series အသစ် ( Mi CC 10 Series ?) အနေနဲ့ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေက Mi CC Series အနေနဲ့ပဲထွက်လာနိုင်‌ေခြရိှပါတယ်။အကြောင်းကတော့ အရင် CC9 Pro ဟာ 2019 နို၀င်ဘာလမှာထွက်ခဲ့လို့ပါပဲ။ နောက်ပြီး CC9 Pro ဟာ 108MP Camera ပါလာတာတောင်ဈေးကသက်သာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Mi CC Series အသစ် CC10 Pro ဟာ ဈေးအသက်သာဆုံး 108MP ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီဖုန်းအသစ်တေ‌ွကို ဘယ်အချိန်မှာတွေ့လာရနိုင်လဲ?
အပေါ်မှာ Leakster က ဖုန်းတွေထွက်လာဖို့ အချိန်သိပ်မလိုတော့ဘူးလို့ပြောထားတာမို့လို့ နောက်လ ဒါမှမဟုတ် နို‌၀င်ဘာလောက်မှာ‌ေတွ့လာရနိုင်ပါတယ်။
Mi CC10 ProXiaomi